राजेन्द्र खड्गीले ऋषि धमलालाई भने गुण्डा, ऋषिको प्रतिक्रिया यस्तो | filmyinfo.com
राजेन्द्र खड्गीले ऋषि धमलालाई भने गुण्डा, ऋषिको प्रतिक्रिया यस्तो
चर्चित द्वन्द निर्देशक तथा कलाकार राजेन्द्र खड्गीले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्ताको क्रममा पत्रकार ऋषि धमलालाई गुण्डा प्रवृत्तिको पत्रकार भनेका छन् । उनले अन्तर्वार्ता लिंदै गरेका पत्रकार प्रकाश सुवेदीलाई समेत गुण्डा भन्न छोडेनन् । स्पष्ट वक्ताको रुपमा परिचित राजेन्द्र खड्गीलाई प्रकाश सुवेदीले “तपाईलाई धेरैले गुण्डा पनि भन्छन् नि ?” भन्ने प्रश्न राख्दा उनले “तपाई पनि गुण्डा हो । तपाई, ऋषि धमलाजी सबै गुण्डै हो, सबै गुण्डा प्रवृत्तिको पत्रकार” भनेर जवाफ फर्काएका हुन् ।
यहि अन्तर्वार्ताको सानो अंश अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । र, सञ्चारकर्मी श्यामहरि शिवभक्तिले पत्रकार ऋषि धमलालाई भाइरल भिडियोको क्लिप देखाउदैं “कसैले तपाईलाई गुण्डा पत्रकारको ट्याग दिंदा खेरी चित्त दुख्दैन ?” भनेर प्रश्न गर्दा ऋषि धमलाले प्रतिप्रश्न गरे “उहाँले छातीमा हात राखेर भने हुन्छ, को गुण्डा हो क्या ! को गुण्डा हो ? उहाँले भनेका कुराहरुमा टिकाटिप्पणी गरेर, आलोचना गरेर समय खेर फाल्न चाहन्न ।” उनले थपे, “साँच्चै भन्ने हो भने यो प्रतिक्रिया दिनलाई उचित विषय पनि होइन ।”
द ब्रेकअप टिमले आउदो पुस २७ गते फिल्म रिलिज गर्ने